समाचार - डायटोमासियस पृथ्वी कीटनाशकको ​​लागि
के तपाईंले कहिल्यै डायआटोमेसियस पृथ्वीको बारेमा सुन्नुभएको छ, यसलाई डीई भनेर पनि चिनिन्छ? ठीक हैन भने, चकित हुनको लागि तयार हुनुहोस्! बगैचामा diatomaceous पृथ्वी को उपयोग महान छ। डायआटोमेसियस पृथ्वी साँच्चिकै आश्चर्यजनक सबै-प्राकृतिक उत्पाद हो जुन तपाईंलाई सुन्दर र स्वस्थ बगैंचा बढ्न मद्दत गर्दछ।
डायआटोमेसियस पृथ्वी भनेको के हो?
डायआटोमेसियस पृथ्वी जीवाश्मयुक्त पानीको बोटबाट बनेको हुन्छ र एक स्वाभाविक रूपमा हुने सिलिसियस तलछट खनिज यौगिक हो जसलाई डाइएटमहरू भनिने शैवालजस्ता बोटबिरुवाबाट छोडिन्छ। बिरुवाहरू प्रागैतिहासिक कालदेखि पृथ्वीको इकोलोजी प्रणालीको हिस्सा भएका छन्। छोकीले डायाटमलाई छोडिन्छ डायाटोमाइट। डायटाम खानीएको छ र पाउडर बनाउनको लागि ग्राउन्ड अप छ जुन देखिने ट्याल्कम पाउडर जस्तो महसुस गर्दछ।
डायआटोमेसियस पृथ्वी खनिजमा आधारित कीटनाशक हो र यसको संरचना करीव percent प्रतिशत म्याग्नेशियम, percent प्रतिशत सोडियम, २ प्रतिशत फलाम, १ percent प्रतिशत क्याल्शियम र percent 33 प्रतिशत सिलिकनका साथै अन्य ट्रेस खनिजहरू हुन्छन्।
बगैचाको लागि डायआटोमेसियस पृथ्वी प्रयोग गर्दा, यो केवल "फूड ग्रेड" डायटोमेशियस पृथ्वी किन्नको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र डायटोमेसियस पृथ्वी होइन जुन स्विमिंग पूल फिल्टरको लागि प्रयोग गरिएको छ। स्विमिंग पूल फिल्टरहरूमा प्रयोग गरिएको डायआटोमेसियस पृथ्वी बिभिन्न प्रक्रियामा जान्छ जुन आफ्नो मेकअपलाई निःशुल्क सिलिकाको उच्च सामग्री समावेश गर्न परिवर्तन गर्दछ। खाद्य ग्रेड diatomaceous पृथ्वी लागू गर्दा पनि, यो एक धूलो मास्क लगाउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ ताकि diatomaceous पृथ्वी धूलो को धेरै सास छैन, किनकि धूलोले तपाईंको नाक र मुखमा श्लेष्म झिल्ली चर्काउन सक्छ। एकचोटि धूलो स्थिर भयो, यद्यपि यसले तपाई वा तपाईका घरपालुवा जनावरलाई समस्या उत्पन्न गर्दैन।
बगैंचामा डायआटोमेसियस अर्थ के हो?
डायटोमासस पृथ्वीका लागि प्रयोगहरू धेरै छन् तर बगैंचामा डायटोमासियस पृथ्वीलाई एक कीटनाशकको ​​रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। डायआटोमेसियस पृथ्वीले कीराहरूबाट छुटकारा पाउन कार्य गर्दछ जस्तै:
वयस्क फ्ली बीटलहरू
कॉकरोचेस स्नेल स्लगहरू
यी कीराहरूका लागि डायआटोमेसियस पृथ्वी सूक्ष्म तीक्ष्ण किनारहरू भएको घातक धूलो हो जुन उनीहरूको सुरक्षा कभरिंगमा काट्छ र सुकाउँछ।
कीट नियन्त्रणको लागि डायआटोमेसियस पृथ्वीको फाइदाहरूमध्ये एउटा यो हो कि कीराहरूले यसको प्रतिरोध गर्ने कुनै तरिका नै हुँदैन, जुन धेरै रासायनिक नियन्त्रण कीटनाशकहरूको लागि भन्न सकिदैन।
डायआटोमेसियस पृथ्वीले गँड्यौला वा माटोमा लाभदायक सूक्ष्मजीवहरूलाई हानि गर्दैन।
डायआटोमेसियस पृथ्वी कसरी लागू गर्ने
अधिकांश स्थानहरू जहाँ तपाईं डायआटोमेसियस पृथ्वी खरीद गर्न सक्नुहुनेछ उत्पादनको उचित अनुप्रयोगमा पूर्ण दिशा निर्देशनहरू। कुनै पनि कीटनाशक जस्तै, लेबल राम्ररी पढ्न र त्यसमा निर्देशनहरूको पालना गर्न नबिर्सनुहोस्! दिशाहरूमा कसरी बोटबिरुवा र घरको भित्र धेरै कीराहरूको नियन्त्रणको साथसाथै तिनीहरूको बिरुद्दमा एक बाधा बनाउने दुवैमा डायआटोमेसियस पृथ्वी (डीई) लाई कसरी राम्रोसँग प्रयोग गर्ने भन्ने समावेश छ।
बगैचामा डाइएटोमेसियस पृथ्वीलाई धूलोको रूपमा लागू हुन सक्छ यस्तो प्रयोगको लागि अनुमोदित धुलो अनुप्रयोगकर्तासँग; फेरि, यो diatomaceous पृथ्वीको प्रयोगको क्रममा धुलोको मुखौटा लगाउन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ यस तरीकाले र मास्क छोड्नुहोस् जबसम्म तपाईं धुलो क्षेत्र छोड्नुहुन्न। घरपालुवा जनावर र बच्चाहरु लाई धुलो भएको क्षेत्रबाट सफा राख्नुहोस् धूलले सके सम्म। धुलो अनुप्रयोगको रूपमा प्रयोग गर्दा, तपाईं दुबै माथि र सबै पत्थरको मुनि धूलोको साथ कभर गर्न चाहानुहुन्छ। यदि यो धुलो अनुप्रयोग पछि ठीक वर्षा हुन्छ भने, यसलाई पुनः लागू गर्नु आवश्यक पर्दछ। धुलो प्रयोग गर्नका लागि उत्तम समय भनेको हल्का बर्षा पछि वा बिहान सबेरै बिहानै जब शीत पर्दछ तब यसले धुलोलाई पातमा राम्रोसँग राख्नमा मद्दत गर्दछ।
हाम्रो बगैंचा र हाम्रा घरहरू वरिपरिको प्रयोगको लागि यो प्रकृतिको आश्चर्यजनक उत्पादन हो। यो नबिर्सनुहोस् कि यो डायटोमासियस पृथ्वीको "फूड ग्रेड" हो जुन हामी हाम्रो बगैंचा र घर प्रयोगको लागि चाहन्छौं।